Faston: zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvinhu | Mahara emahara
Faston: zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvinhu
Zvirokwazvo hauna kumbonzwa nezvake faston, asi kana iwe wakashanda pane zvemagetsi mapurojekiti iwe waakaona uye akaashandisa kanopfuura kamwe. Ivo vakakura vasingazivikanwe, nekuti hachisi chinhu chakakosha, iwe unogona kuita iyo DIY chirongwa pasina iyo uye zvaisazokanganisa mashandiro, kunyangwe iko kushandiswa kwayo kuchikurudzirwa zvakanyanya kunyaradzwa uye kuchengetedza "hutano" hwakanaka hwetambo dzako.
Muchirongwa ichi iwe unodzidza Zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvemagetsi chikamu, kubva pane zvavari, mashandisiro avo, mashandiro avo, kumaturusi aunowana pamunwe wako kushanda navo ...
1 Chii chinonzi faston
2 Mashandisiro ainoita
3 Chii chandinofanira kufunga nezvacho?
3.1 Kwokutenga faston
4 Maturusi ekushanda navo
Chii chinonzi faston
Un faston, terminal kana terminalSezvo iwe uchida kuidaidza, hachisi chinhu chinopfuura chinongedzo kuwedzera kune kumiswa kwetambo yemagetsi kuti ugone kuibatanidza kune imwe chishandiso kana network. Kumisikidzwa uku kunogona kungova conductor pamagumo etambo kana zvakare kuve nezvimwe zvinowedzera zvimwe zvakaita senge screws yekusimbisa, nezvimwe.
Zvinhu zvakasiyana zvinogona kugadziriswa kuitira kuti ugone kuodha iyo mhando dzekutsanya izvo zviripo mumusika:
De / nekukurumidza kubatana
Bvudzi kana rurimi
Ehe, iwe uchawana zvinoriumba zvese murume nemukadzi, sezvo iwe uchida kukwana chinongedzo.
Pamusoro peizvozvo, iwe mune iwo maindasitiri akateedzana mazita ekuti zvinhu izvi zviitwe, senge akateedzana iyo yavanonyorwa mumusika weAmerica:
312 Series: vari 7.92 mm varume vanobatanidza.
250 Series: zvakare murume mhando uye nematanho e6.35 mm.
205 Series: mune iyi kesi vari echirume mhando uye 5.21 mm.
187 Series: kukura kusvika ku4.75mm uye murume mhando zvakare.
125 Series: 3.18 mm murume.
110 Series: 2.79 mm murume.
Mukati mega yega yeakateedzana pane zvakare mutsauko pasi peiyo AWG kudomwa (American Wire Gauge) inoona zviyero zvehupamhi zvichienderana nemirau yepurasitiki inoenda navo.
Zvinoenderana nerudzi rwe faston, kana terminal, mashandisiro anogona kusiyana zvishoma. Zvimwe zvinosanganisira grimaces iwe aunogona kurovera pane mamwe maanobatanidza kuti ubatanidze magetsi. Zvimwe zvinoputirwa mukati kuti zviiswe, nezvimwe.
Kune zvekare mamwe faston mhando yekubatanidza ayo ari kwenguva pfupi, ndiko kuti, vanogona kudamburwa nyore kana zvichidikanwa. Idzi ndidzo dzinowanzoitika mumatunhu anowanzo dhonzwa kazhinji kana muzvikamu zvinoda kuchinjwa pane dzimwe nguva.
Zvimwe ndezvorudzi rwechigarire, sezvo zvakasunganidzwa uye zvakasungirirwa zvachose. Nekudaro, haisi iyo Welding isingadzoreke, nekuti simbi yekunamatira yaigona kushandiswa kubvisa kubatana uye kutsiva chinhu chakakanganiswa. Asi izvi zvakanyanya kunetsa ...
Chii chandinofanira kufunga nezvacho?
Kune akawanda marudzi uye vagadziri ve faston pamusika. Izvo zvinoita kuti zviome kusarudza dzimwe nguva kana kuti iwe unozopedzisira wasarudza yekutanga yaunowana. Asi iwe unofanirwa kufunga nezvezvimwe zvinotarisirwa kuitira kuti sarudza zvakanakisa kune zvaunoda. Uye izvo zvinoitika kune hunhu hwakadai se:
Unhu hwezvinhu. Vamwe vakasimba kupfuura vamwe. Dzimwe nguva dzakachipa dzinogona kunge dzakashata zvekuti dzinotyoka panguva yekugadzirisa neye crimper. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogara uchisarudza izvo zvakagadzirwa nespecial manganese simbi uye yakakwira-density plastiki. Mhangura uye PVC zvakare zvakanaka, kunyanya zvekushandisa zvemagetsi.
Vipimo. Izvi zvinoenderana nekushandisa kwaunenge uchizopa uye chishandiso chauchazoshanda nacho. Usashandise fastons yakakura kwazvo tambo dzakatetepa, kana zvinopesana, kana iwe unozopedzisira uine matambudziko. Semuenzaniso, ine faston iyo isingabatirire iyo yaunoshanda nayo kana yakakurisa faston iyo inogara yakasununguka pane tambo uye isingaite hukama hwakanaka.
Tipo. Izvi zvakare zvemunhu uye zvinoenderana nezvinodiwa. Ungangoda kubatana kuri nyore faston kana uchizoishandisa pachishandiso chaunofanira kubatanidza nekudzima nguva nenguva, kana iwe uchida icho chinokutendera kuti ushandise sikuruu kuchigadzirisa uye icho chisingadambure muzvishandiso zvefoni, izvo vibrate, nezvimwe.
Faston yakanyanyisa chipa kuti iwe unogona kutenga muzvitoro zvakawanda zvine hunyanzvi. Mumusika iwe une akasiyana akasiyana aya ma terminals emapurojekiti ako, akadai se:
Kit yemazana mapfumbamwe emhando dzakasiyana uye mavara
Kit yemakumi matatu nemakumi mapfumbamwe akasiyana uye mavara zvidimbu
Kit yemhando dzakasiyana dze faston + crimper + plugs
Bhegi bhegi rine akawanda emurume neechikadzi faston terminals
720 zvidimbu mukadzi nemurume vane inodziya ruoko
Bhonasi: 12 saizi polyolefin kupisa shrink tubing assortment
Maturusi ekushanda navo
Kuti unyatsogadzirisa zvinhu zve faston kune tambo yako, chakanakira ndechekuti usashandise zvimwe zvishandiso zvisina kurumbidzwa zvakaita semapapiro, mapureti nezvimwewo, sezvo uchikwanisa kuguma nechinhu chakatyoka kana chisina kugadziriswa zvakanaka. Sezvineiwo, iwe unofanirwa kushandisa crimpers iyo iwe yaunowana mumusika uye izvo zvakare zvinokutendera iwe kugadzirisa iyo faston kune tambo dzako nenzira yehunyanzvi.
Semuenzaniso, une zvaunogona zvimwe zvakachipa maturusi akadai se:
Qlouni yakawanda-inoshanda crimper 0.25-1mm2 / 28-18AWG.
JBM crimper yemutengo wekukurumidza faston zviteshi
Presch nyanzvi yekumanikidza crimper
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Faston: zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvinhu
Walkman ane Raspberry Pi uye floppy disks yekuchengetedza mimhanzi
Brush isina mota: zvaunofanira kuziva nezve aya motors